Ardayda reer Puntland ee dalalka Itoobiya iyo Shiinaha oo baaq ka soo saaray xaaladaha Puntland. – Radio Daljir
Diseembar 29, 2012 2:22 b 0
Baaqaasi ayaa u qornaa sidatan.
Addis-Abbaba, Dec, 29- Waxaan halkaan ka soo jeedinaynaa fikir aan ku midaysanahay anagoo ah ardada reer puntland ee wax ka barata dalalka Shiinaha iyo Ethiopia fikirkaas oo kusaabsan siyaasada aan suubanayn ee kataagan gayigeenii puntland.
Waxaan xaq u leenahay oo uu dastuurka puntland qorayaa inaan fikir ka dhiibankarno marxaladaha kala duwan ee ay puntland marayso maanta waxaan u aragnaa inay puntland marayso meeshii ugu adkayd marka waxaan garanay inaan fikirkeena kaga hadalno arrimahaas aan wanagsanayn ee dulkeenii ka taagan.
?dowlada hada talada haysaa ee uu hogaaminayo madaxwayne Dr:Abirahman ( faroole) xaq uma aylaha inay muwaadiniinta reer puntland kuwooda wax kagaradka ah aqoonyahanada ah ay dhaawacdo , xirxidho ama ay u diido anay fikirkooda xaqa ay u leeyihiin dhiibtaan.
waxaa xusid mudan in ay dadbadan oo muwadiniin reer puntland oo saxafiyiin ah ay dhibaatooyin waawayn kala kulmeen maamulka xiligiisu sii dhamaanayo.
Waxaa xusid mudan in odayaal dhaqameedyo la xirxiray lana jirdilay misana labahdilay intaasna ay ku kasbadeen masalaxadaynta puntland iyo aayo katalinta umada soomaaliyeed ee puntland.
Waxaa kaloo aan aad ulayaabnay ama u dhaleecaynaynaa dadka aqoonyahanada ah ee qurbaha uga yimid u gargaarida umadooda waliba kuwooda liita ee aanan awooda u lahayn inay wax qabsadaan in laxiro oo la dilo oo intaas loosameeyo fikirkiisa uubsan ee uu yiri.
?hadaba hadii aan nahay arday ubax u soo kacaya dalkooda iyo dadkooda tolow fikirkeena anagana manalgu dhibaatayn doonaa.
suaashaan waxay toos ugu socotaa maamulka puntland.
haday jawaabtu tahay haa : fadlan maamuloow uma soo socon puntland oo adi daraadaa iyo xornimo la’aan owgeed baan wadankeenii uga tagaynaa ugana haajiraynaa.
haday jawaabtu tahay may fadlan dadka kale oo nala midka ah ama naga macquulsan ee aad haysataan ee masaakiiminta ah ee waxgaradka ah xaqana u leh waxay ku hadleen siidaaya oo xornimadoodii usoo celiyaa raali galiyana kuwa aad dhaawacdeena daaweeya oo u naxariista.
maahan madaxwayne faroole uu sameeyo (crating assassination and deformation0 oo uu horay u yri dadka sameeyey baan ladagaalamayaa.
Fadlan ka fiirsada waxa aad ku kacaysaan ee aad kula kacaysaan dadkiina iyo dalkiina waxaa lawada ogyahay oo aad Allah magaciisa ku marteen 4 sano xaq umalihidiin inaad awood noo sheegataan oo aad na maquunisaan ee waxaan u baahanahay isbedel dhab ah oo umadeena wax tara. waxaan halkaan kacadaynaynaa inaan qolo janjeerin ee xaq aan isku raacnay iyo waxa ba’an ee kataagan gayigeena.
Mucaaradoow waxaan isinka codsanaynaa inaad amnigiina iyo amniga dadkiina ilaalisaan iyo hormarka iyo isku duubnaanta puntland iyo dadkeeda ee inaan ka talin burbur iyo kalayaac. waxaad arrimihiina siyaasadeed ku dhamaysaan daganaan iyo dulqaad waa waxa aan idin ku dooran doono haduu eebe idmo.
?isimada reer puntland:
Isimow waxaan isinka codsanaynaa inaad arrintaan wax ka tiraahdaan adinkaa marjicii loo noqonayay ah ee maahan inaad iska daawataan dhibaatada ku soo fooda leh gayigeena adinkaan idin aaminay oo idin sharafnay inaad noo xushaan baarlamaan xaq ah oo doorta madaxwayne xaq ah oo xaqa jecel.
waxaan dadwaynaha reer puntland kula dardaarmaynaa inaa nabada ka shaqaysaan iyo isku duubnaantiina fikirkiinana inaan la baqin ee aad ku adkaysataan oo aad kudbisataa waloow dhiba ha idinku soo gaartee waa wax aad xaq u leedihiin. lkn iniinaan dhib ka talin ee aad ka talisaan horma dalkiina somaliya gaar ahaan goboladiina puntland.aadna mudaaharaadyo aan shido wadan samaysaan iyo kacdoon wanagsan.
Gudoomiyaha Ururka dhalinyarada ee china :
Dr Fahada Abdisalan Mohamud (Takar)
Gudoomiyaha ardada deeqda waxbarasha ee ethiopia:
Mohamed majidho Abdihaashi